အသက် ၄၀အရွယ်တဲ့ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » အသက် ၄၀အရွယ်တဲ့
စနိုးလေးကို ကိုပေ သေချာလိမ်းပေးပါမယ်ကွယ်
အနော့်စကားကိုပဲ ယုံ .. သိလား .. ဟီဟိ ..
အလှပြင်ပစ္စည်းတွေလည်းများလှပါတယ်ရှုပ်နေတော့တာပါပဲ စနိုးရယ်။ နားမလည်တာနဲ့ မျက်နှာသစ်ဆေးကလွဲရင်ဘာမှကိုမသုံးဖြစ်။
အယ် ..အဲ လောက် အများကြီးးဝယ်လိမ်းနိုင်ပါဘူးတော် ….
နဂိုရှိမှ နဂိုင်းထွက်တာပါအေ …..
အမှန်တော့ အရှည်ကြီး ဖြစ်နေလို့ပါ ။ လိုရင်းက ။
အဘ ရန်ကုန်မှာ Transparent soap ရှာဝယ်ဘူးပါတယ် ။
အင်း…… သူလည်း MRTV ကို အားကျတယ်ထင်ပါ့…..။ ကြော်ညာ သွားလိုက်တဲ့ ပစ္စည်း အမယ်တွေ များလိုက်တာ……….။ ကျော်ညာ ခ ဘယ်လောက်ရသလဲ ဟင်……….
အတက် ၄၀ ပြောသမို့ နာတို့ အတွက်များလားလို့
အမေ အသက်လေးဆယ်မှာ ကျုပ်ကောင်းကောင်းဂျီး သိတတ်နေပီ ဒီတော့ အသက်လေးဆယ်အရွယ် အပျိုဂျီး၊ အာပြိုဂျီး အားလုံးကို ဤနေရာမှ ကန်တော့ပါသည်။ :eek:
၀တ်စားလိုက်တာ ကော့လို့ …ပျံလို့….. ရာကျော်တန် ထီးနဲ့ဖိနပ်….လက်သဲနီက ရောင်စုံမက….
အသက် ၄၀အရွယ်၊ ကိုကို ကာလသားတွေ အတွက်ကျ မပါဘူး၊ မတရားဘူး။
အသားအရေထိမ်းတာလဲ ထိမ်းတာပေါ့ အဓိကက ကံ၊စိတ်၊ဥတု၊အာဟာရတဲ့ ဒီလေးမျိုးမျှအောင်နေ ဘာ ကော့စမစ်တစ်မှမလို….
ဟီး…ဟီး.. မတူတဲ့ အမြင်နဲ့မန့်ကြည့်ဒါ…
mahaw နဲ့ ahnyartamar တို့ရေ
south thal says:
သားသားအသက်က ခုမှ ၅၃ဆိုတော့ သူပြောတာ က အသက်၄၀ အရွယ်ဆိုတော့ သားသားတို့အတွက်မပါဘူး။။။